Igolide (XAUUSD) Inyuka phezulu, iThagethi ye-1,920 yeedola eziphezulu
Igolide (XAUUSD) ikwi-uptrend. Imarike iyenyuka njengoko imivalo yexabiso ingaphezulu kwemiyinge ehambayo. I-uptrend yangoku ibambelele kwi-$ 1,877 ukususela ngoNovemba 16. Ukunyuka okuphezulu kuya kuphinda kuqalise ukuba ukuchasana kwangoku kuphulwa. Okwangoku, ngoNovemba 16 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,907.00.
I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka. IGolide ikwinqanaba lama-65 leSalathiso saMandla aNxulumanayo kwixesha le-14. Imarike isondela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwemiyinge ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka kweGolide.
Kwitshathi yeyure ye-4, ixabiso leGolide likwi-uptrend. Ukunyuka okuphezulu kubambekile kwinqanaba le-1,866 yeedola. I-XAUUSD ikwicala lokuhamba ngezantsi kochaso. Okwangoku, ngoNovemba 16 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6 % yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,907.
Igolide ingaphezulu koluhlu lwe-50% yestochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezu kwe-21-day SMA. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Igolide's (XAUUSD) ikwi-uptrend. Imarike isondela kwinqanaba lexabiso lembali yangaphambili ye-1,916 yeedola. Abathengi baya kujongana nokuchasana okuqinileyo kwinqanaba eliphezulu lamva nje. I-overhead ayikaphuki ukusukela nge-2 kaJuni.
Inkcaso ephambili: 1787
Inkxaso ephambili: 1779 - 1772
Igolide yayineseshoni ye-bearish kakhulu ye-Friday yehla -1.60% ukusuka kwi-lows yeveki ukuya kwii-lows zangoLwesihlanu eziqhekezayo kunye nenqanaba eliphambili langaphambili (1787).
Ngoku irholile ukuphinda ivavanye lo mgangatho wophukileyo kanye ngelixa ishicilela ipateni yokuqhubeka. Ingcamango yam yorhwebo kukuthengisa ngexesha lekhefu le pateni.
Emva kokuba iGolide iqhawuke kwicala elisezantsi kwakungekho santya sokwenyani se-bearish ekudlaleni ndiye ndagqiba ekubeni ndilawule olu rhwebo ngogonyamelo ndihambisa i-SL yam phantsi ngalo lonke ixesha iGolide yenza umgangatho ophantsi omtsha.
Esinye isizathu sokuba ndilawule olu rhwebo ngolunya kungenxa yokuba ndingazange ndibone isantya sokwenyani se-bullish kwi-USD ngaphambi kokuba iLondon ivuleke.
Ukunqongophala kwabathengisi bokwenyani kwiGolide emva kokuqhekeka kwepennant kwehlisa amathuba okuphumelela kwaye ukuba songeza ukunqongophala kwabathengi be-USD inkohliso yayinyanisekile emva kokuqhambuka.
Ukulawula izikhundla ezilahlekileyo kukwayinxalenye enkulu yenzuzo yexesha elide.
Igolide (i-XAUUSD) ikwiBanga eliDibeneyo lokuHamba, ukuXhathisa iiMfazwe kwi- $ 1,800
IGolide (XAUUSD) iUkurhweba nge- $ 1,783.14 phakathi kuluhlu lwamaxabiso. I-XAUUSD ikuluhlu oluboshwe kwinqanaba phakathi kwe- $ 1,720 kunye ne- $ 1,835. Abathengi kunye nabathengisi abakaphuli amanqanaba abotshwe kuluhlu. Okwangoku, isenzo sexabiso sibonakaliswa zizibane ezincinane zomzimba. Ezi zibane zinoxanduva lokuhamba okwangoku kuluhlu. Ukuhamba kwamaxabiso bekumile kuluhlu lwamaxabiso. Igolide iya kuphinda iqhubeke inyukele phezulu ukuba ukunganyangeki kwi- $ 1.835 kwaphuliwe.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni. Igolide ikwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength period 14. Igolide ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Igolide iya kunyuka ukuba imivalo yamaxabiso ingaphezulu komndilili oshukumayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iGolide ikwi-uptrend. Ixabiso liphuliwe ngaphezulu komndilili wokuhamba ukufikelela phezulu kwi-1,800 yeedola kodwa ubuyile umva. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-20 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye i-1,801.20 yeedola.
Igolide ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iibhendi ze-stochastic zihla phezulu zibonisa umfutho wokukhula ngamandla. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
IGolide (XAUUSD) iswele abathengi kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso. Ukunyuka okuphezulu kuye kwathintelwa ngaphantsi kweedola ezili-1,800 zokuchasana. Okwangoku, isixhobo seFibonacci sibonisile ukuba iGolide iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye i-1,801.20 yeedola.
Inkxaso ephambili: 1775
Ukuchasana okuphambili: 1790 - 1800
Emva kwentshukumo yangoLwesihlanu ophelileyo (-2.17%) Igolide iqokelelene kummandla otyebileyo (1745-1760) ukuya phezulu kuluhlu lweveki ephelileyo ngelixa usathengisa ngaphakathi kwesakhiwo esinee-bearish kakhulu.
I-DXY i-bearish kakhulu ngalo mzuzu kwaye kufanele ukuba izise uxinzelelo lwe-bullish ngakumbi kwiGolide ngakumbi ukuba ibambe ngaphezulu kwenqanaba leveki ephelileyo.
Inqanaba lesitshixo elilandelayo elinokubamba icala kwiGolide nguLwesine odlulileyo. enokugcina urhwebo ngegolide ngaphakathi kolu lwakhiwo lwe-bearish.
Urhwebo lwam kukuseta okuqhubayo okuqhubayo emva kwekhefu kunye nokubuyiselwa kwinqanaba le-1779 (uluhlu lweveki ephelileyo)